भिटामिन सी को स्वास्थ्य लाभ - मद्दत MEHemp
भिटामिन सी हाम्रो स्वास्थ्यको लागि एक आवश्यक भिटामिन हो। यो हाम्रो खानामा खपत हुनै पर्छ, किनकि शरीरले कुनै भिटामिन सी उत्पादन गर्दैन, तर भाग्यवस भिटामिन सी धेरै फलफूल र तरकारीहरू सहित, धेरै स्वादिष्ट खानामा पाइन्छ।
भिटामिन सीले धेरै स्वास्थ्य लाभ प्रदान गर्दछ। वास्तवमा, भिटामिन सी हाम्रो स्वास्थ्यको लागि यति महत्त्वपूर्ण छ कि यसलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको आवश्यक औषधिहरूको मोडेल सूचीमा समावेश गरिएको छ। मानव शरीरमा यसको प्रयोगहरू मानवीय ऊतकहरूको मर्मत, स्वस्थ मस्तिष्कको कार्यलाई बढावा दिन, प्रतिरक्षा प्रणाली बढाउने, र एन्टिऑक्सिडन्टको रूपमा कार्य गर्दछ। अनुसन्धानले यो पनि देखायो कि भिटामिन सी हृदय रोग, आँखा रोग, जन्मपूर्व स्वास्थ्य समस्याहरू र छालाको छाला पनि।
भिटामिन सी को एक अद्भुत विशेषता यो हो कि त्यहाँ धेरै लिन को कुनै साइड इफेक्टहरु छन्। शरीरमा कुनै पनि अधिक भिटामिन सी पेशाबको माध्यमबाट बाहिर निकालियो। त्यसोभए जब श doubt्का लाग्छ, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले आफ्नो शरीरलाई स्वास्थ्य कायम राख्न पर्याप्त भिटामिन सी दिँदै हुनुहुन्छ।
अब हामी भिटामिन सीबाट सात आश्चर्यजनक स्वास्थ्य लाभहरू हेर्छौं।
1. एक Antioxidant को रूप मा प्रयोग गर्नुहोस्
एन्टिऑक्सिडन्टहरू प्रतिरक्षा प्रणालीलाई प्रवर्धन गर्न प्रयोग गर्दछ। यो फ्रि रेडिकलको रूपमा चिनिने हानिकारक अणुहरूबाट शरीरको कोषहरूको रक्षा गरेर पूरा हुन्छ। फ्रि रेडिकल शरीरमा जम्मा हुन्छ, र ऑक्सीडेटिव तनावको स्थितिमा ल्याउन सक्छ। अनुसन्धानले देखाएको छ कि ऑक्सीडेटिव तनाव एक प्रमुख खेल्छ भूमिका पुरानो र डिजेनेरेटिव रोगको विकास जस्तै क्यान्सर, स्वत: प्रतिरक्षा विकार, बुढ्यौली, मोतियाबिंद, संधिशोथ, हृदय र न्युरोडिजनेरेटिव रोगहरूको विकासमा।
र भिटामिन सी एक सशक्त एन्टिआक्सिडन्ट हो जसले फ्रि रेडिकलहरूसँग लड्छ। त्यसकारण तपाईलाई पर्याप्त भिटामिन सी पाउनु भनेको पुरानो रोग र पतित रोगहरूको विरूद्ध लड्नको लागि एक सुरक्षित तरिका हो।
2. रक्तचाप कम गर्दछ
उच्च रक्तचापले हृदय रोगको जोखिम बढाउँछ, जुन विश्वव्यापी रूपमा मृत्युको प्रमुख कारण हो। लगभग तीन अमेरिकी वयस्क मध्ये एक मध्ये उच्च रक्तचाप छ। त्यसैले भिटामिन सी उच्च रक्तचापको साथ जनसंख्याको ठूलो खण्डको लागि हृदय रोगको जोखिम कम गर्दछ। तर उच्च रक्तचाप बिनाका व्यक्तिको हृदय रोगको सम्भावना पनि कम देखाइएको छ। छोटकरीमा, भिटामिन सीले हृदय रोगको विकासको जोखिम कम गर्न मद्दत गर्दछ।
3. गाउट रोक्दछ
गाउट एक अत्यन्त दर्दनाक गठिया हो जुन प्रत्येक २ 1 अमेरिकी वयस्क मध्ये १ भन्दा बढीलाई असर गर्छ। यसले जोडहरूको सूजन समावेश गर्दछ, विशेष गरी ठूला औंलाहरूको। जो गाउटबाट पीडित हुन्छन् अचानक र गम्भीर दुखाइको हमला हुन्छ।
गाउट को लक्षणहरु जब त्यहाँ ल्याईन्छ is रगतमा यूरिक एसिडको अत्यधिक मात्रा। सामान्य शारीरिक कार्यहरूको फोहोर उत्पादन, युरिक एसिडको उच्च स्तरले जोर्नीहरूमा क्रिस्टलाइज र जम्मा गर्न सक्छ।
अनुसन्धानले पत्ता लगायो कि भिटामिन सीले रगतमा यूरिक एसिडको स्तर कम गर्न सक्छ। यो गाउट पीडितहरुबाट राहत प्रदान गर्दछ।
4. फलामको अवशोषण सुधार गर्दछ
फलाम महत्त्वपूर्ण खनिज हो। धेरै व्यक्तिले फलामलाई आवश्यक पौष्टिक तत्वको रूपमा लिदैनन्, यद्यपि फलाम अमेरिकामा सबैभन्दा सामान्य पोषणको कमी हो
फलामले शरीरको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दछ। यो हेमोग्लोबिनमा महत्त्वपूर्ण घटक हो, जुन रातो रक्त कोषहरूको अंश हो जुन तपाईंको शरीरभरि कोशिकाहरूमा अक्सिजन बोक्छ। पर्याप्त स्वस्थ रातो रक्त कोषहरू बिना, तपाईंको शरीरले पर्याप्त अक्सिजन प्राप्त गर्दैन।
भिटामिन सी ले तपाईंको आहारबाट फलामको अवशोषण सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। यसको परिणामले तपाईंको शरीरमा फलामको अधिक चीज लिने छ जुन तपाईंले खानु भएको खाद्यहरूमा समावेश हुन्छ। यो विशेष प्रकारको इन्धनको मासु नखाने व्यक्तिहरूको लागि महत्वपूर्ण कार्य हो। त्यसकारण, भिटामिन सीले एनीमियाको जोखिम र लक्षणहरूलाई कम गर्न सक्छ।
5. प्रतिरक्षा बढाउँछ
भिटामिन सी सप्लीमेन्ट लिने व्यक्तिहरूको प्रमुख प्रयोग उनीहरूको प्रतिरोध क्षमता बढाउनु हो। भिटामिन सीले सेतो रक्त कोशिकाको उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्दछ, जसले शरीरलाई संक्रमणबाट बच्न मद्दत गर्दछ। थप रूपमा, माथि उल्लेख गरिए अनुसार, भिटामिन सीले सेता रक्त कोषहरूलाई उनीहरूलाई फ्रि रेडिकलबाट बचाएर प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्दछ। अध्ययनले यो पनि देखायो कि भिटामिन सी ले ले छालाको घाउहरूको उपचार गर्ने समयलाई असर गर्दछ।
हेल्पमेहेम्प.org यसमा भिटामिन सी को आश्चर्यजनक लाभ प्रदान गर्दछ विशेष goji बेरी प्रोटीन मिश्रण। यसको अन्य अचम्मको स्वास्थ्य गुणहरूको साथसाथै, goji जामुन छन् भिटामिन सी को एक अद्भुत स्रोत It पनि बनाउछ तपाईंको शरीरको लागि एक स्वादिष्ट र स्फूर्तिदायी स्मूदी। त्यसैले एक स्वादिष्ट र स्वस्थ उपचार दोषी स्वतन्त्र उपचार, जान्न कि तपाईं अविश्वसनीय स्वास्थ्य लाभ प्रदान गर्दै छ र छan भिटामिन सी को अद्भुत स्रोत.